जाडो दिनमा किन बर्सेनि पोलिन्छन् चेपाङ बालबालिका ? – Etajakhabar
जाडो दिनमा किन बर्सेनि पोलिन्छन् चेपाङ बालबालिका ?
थाप्राङ, चितवन – चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका १, थाप्राङका श्याम चेपाङले छोरीको नाम खुइलीमाया राखे । आगोले पोलेर कपाल खुइलेका कारण १० वर्षीया ती बालिकालाई गाउँमा सबैले ‘खुइली’ नै भन्छन् । दुई वर्षको हुँदा उनलाई आगोले पोलेको हो । जाडोबाट जोगिन अँगेनाछेउमा सुत्दा खुइली पोलिएकी हुन् । आगोले पोलेपछि कपाल डढेको थियो । टाउको खुइलो भएका कारण उनको नाम नै खुइली रह्यो । दाहिने हातको औंलाले खासै काम गर्दैन, देब्रे हातको कुमदेखि पाखुरासम्म पोलेको छ । ‘आगोछेउ सुत्दा राति अँगेनामा परी’, श्यामले भने, ‘लुगा ओढ्न नपाउँदा जाडो छल्न अगेनामा सुत्नुपर्छ ।’ आगोले पोलेपछि पनि खुइलीले उपचार पाइनन् । श्यामले बाख्राको बड्कौला पिनेर लगाए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष २८, २०७४ समय: ८:०२:४५